Boorama Oo Ka Hadashay Dagaalka Ethiopia Iyo Mawqifkooda Dhinacyada Ku Hirdamaya - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
Boqolaal Qof Oo Qoxootiga Ethiopia oo soo gaadhay Awdal
Boorama(ANN)-Dadka kasoo qaxay dagaalada ka socda dalka Ethiopia, ayaa firxadkoodu soo gaadhay xarunta gobolka Awdal ee Magaalada Boorama.
Salaadiinta iyo Madax-dhaqameedka gobolka Awdal, ayaa ka hadlay xaaladda dagaalka iyo dadka qoxootiga ah ee soo gaadhay Awdal.
Suldaan Cabdiraxmaan Dhawel oo ka mid ah madax-dhaqameedka ugu magaca weyn gobolka Awdal iyo Salaadiin kale, ayaa si adag uga digay khatarta kasoo socota dagaaladda ka socda dalkaa oo ay sheegeen in ay khatar ku yihiin mandaqada.
Suldaan dhawel iyo suldaan Baade oo ka mid ah salaadiinta awdal Image Araweelo News Network, 6 December 2021.
Madax-dhaqameedka oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Boorama, waxay sheegeen in haddii ay sii socoto collaada dalka Ethiopia ka socoto ay sababi karto in malaayiin qoxooti ah ay kusoo butaacaan Awdal iyo meelo kale.
Dhinaca kale, Odayaasha, ayaa si cad u muujiyay mawqifkooda ku waajahan dagaalka iyo dhinaca ay u muujinayaan taageerada dhinacyada ku hirdamaya dagaalka ee xukuumadda Federaalka ee Ethiopia iyo jabhada difaaca qowmiyada Tigray ee TDF.
Sidoo kale, waxay ka hadleen cunaqabataynta dhanka gargaarka aadaminimo loo furo gobolka Tigary, iyagoo Salaadiintu sheegay in dadka Tigray xaq u leeyihiin in ay helaan caawimooyinka gargaarka bini’aadanimo.